Archive du 20200210
Antoko politika ABA Hiezaka hametraka ny rafi-mangaikany manerana ny nosy
Fantatra fa hiezaka hametraka ny rafi-mangaikan’ny antokony manerana ny nosy ny antoko politika ABA manomboka izao ka
Tontolon’ny fifandraisan-davitra Mivoatra hatrany
Mivoatra hatrany ny tontolon’ny teknolojia sy ny fifandraisan-davitra ary anisan’ireo miezaka ny tsy ho taraiky amin’izany ireo mpisehatra eto Madagasikara.
Ny lasa homba ny lasa…
Isan’ny lesoka goavana amin’ny fitantanana ity firenentsika ity ny tsy fisian’ny fahintsiana sy fanetren-tena. Hafa no ambara anio, dia hafa no tanterahina rahampitso.
Fitomboana ara-toekarena Tokony hahatratra 2,4% amin’ity taona ity
Vinavinaina ho 2 ,4% ny fitomboana ara-toekarena manerantany ho an’ity taona 2020 ity araka ny fanambaran’ny banky iraisam-pirenena.
Mpampianatra Malagasy Mila karakaraina ny lafiny maha olona
Miroso amin’ny fanomezana toromarika avokoa ireo minisitra, taorian’ny fanendrena mpikambana governemanta.
Namontana Maty nitsirara teny amin’ny arabe ilay lehilahy
Nahitana fatin-dehilahy iray manodidina ny 45 taona tetsy Namontana ny sabotsy lasa teo.
HAFARI Malagasy Miantso ny fanjakana mba hamatsy vola ny tetikasany
Fikambanana iray misehatra amin’ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny fikambanana Hafari Malagasy tarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina.
Kaominina Alakamisy Fenoarivo Nahazo fotodrafitrasa vaovao
Mbola betsaka ireo Malagasy manao maloto ankalamanjana amin’izao.